Teny amin’ny toeram-pamakiana vato Mahatazana, miaraka amin’ny Akamasoa, izay sahanin’ny Mompera Pedro Opeka, ao amin’ny Kaominina Ambohimangakely i Pape Fransoa ny tolakandro teo. Mpiasa roa mianadahy mianaka no nitsena azy tamin-kira tamin’ny anaran’ireo mpiasa 700 mahery, miasa isan’andro eny an-toerana.
Rasoananahary Hanitra Nirina Madeleine, vevivavy 29 taona, no nitondra tenin'ireo mpiasa eny Mahatazana, nisaotra an’i Papa nitsidika mivantana azy ireo sy miady ho an’ny zon’ny mpiasa manerantany. Maniry ny hanjakan’ny rariny sy hitsinjovana ny mahantra.
Teo amin’ny toerana misy sary vongana vita amin’ny vato notokanana tamin’ny 2008, i Papa Fransoa no nivavaka ho an’ny mpiasa rehetra. Nosinganiny tamin’izany ny hoe mba ho afaka mandeha an-tsekoly avokoa ny ankizy fa tsy voatery hiasa.